Shona النصوص الكتابية
إستعراض: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.
رقم النص: 395
Kwaziwai shamwari! (izvi zvinoitwa zvichifambirana nomukwazisiro unoitwa vanhu murudzi irworo) Douyai timbonzwa hedu Shoko Rakanaka iri. Taisai mubhuku remifananidzo iro munyatsoteerera henyu munzwe. Nguva dzose pamuchanzwa kurira uku kana kuti chenjedzoiyi, ibvai matvaga mufananidzo unotevera wacho mubhuku remifananidzo umo.
Mufananidzo 1: KUSATI KWASIKWA ZVINHU
Pakutanga-tanga chaipo, Mwari chete ndiye akanga ariko. Mwari akasika pasi pano pose akati ngapave nechiedza chokuvhenekera nokuti kwaingova nerima pose pose. Sezvamunongoonawo pamufananidzo uyo zvakaitika ndezvokuti Mwari akaparadzanisa mvura akaita kuti imwe ibve muchadenga ive pasi, imwe iri muchadenga imomo. Zvino mvura yepasi ndiyo iya iri munzizi nomugungwa. Mvura yomuchadenga tino gona kuiona iri mumakore. (Rangararirai kuti mvura inonaya ichibva mumakore.) Mwari akasika zuva kuti ritonge masikati uyewo mwedzi kuti utonga usiku. Mwari akanaka! Ndiye akasika zvinhu zvose uyezve ndiye mutongi wezvose.
Mufananidzo 2: MWARI ANOTAURA
Bhuku iro ramuri kuona pamufananidzo apo rinonzi Bhaibheri. Ndiro Shoko raMwari rinotiudza nezvaMwari nenzira dzake. Mwari anodisisa kwazvo vanu vose zvavo. Isu tinofarira kuita zvinhu zvomusoro wedu asi ndizvo zvacho zvinotiparadzanisa isu naMwari.Bhaibheri rinotiisira pachena nzira imwechete bedzi yokuti tiyanane naMwari. Zvidzidzo (zvira pachokwadi izvi zvamava kuzonzwa iye zvino zvakatorwa zvose muBhaibheri.
Mufananidzo 3: KUSIKWA KWEZVINHU
Mwari neShoko Rake ndiye akasika zvinhu zvose zvakanaka kudai izvi. Akasika pasi pakaoma apa namakomo, negungwa enzizi. Ndipo paakazosikawo zvinhu zvose zvipenyu zvipenyu zvinoti hove dzomumvura, tevere shiri dzomumasango kozoti mhuka dzose. Mwari akafadzwa nezvinhu zvose zvaakasika nokuti zvose zvazvo zvakanga zvakanaka zvokuti bhe!
Mufananidzo 4: ADHAMU NAEVHA
Mwari akazosika munhurume wokutanga anonzi Adhamu uyezve munhukadzi wokutanga anonzi Evha. Akavapa masimba okutonga zvinhu zvose zvaakanga asika pasi pano. Zvose zvakana mumaoko make. Vanhu ivavo vakanga vari shamwari dzaMwari vachitoitawo hurukuro naye mumunda imomo mavaigara havo. Mwari akavapa mvumo yokuti vadye havo muchero wese wese waiva mumunda imomo, asi kusiya muchero mumwe chete chete. Hezvoka pamufananidzo wokuruboshwe uyo maonawoka kuti vatokanda pasi zvose zviya zvokuteerera Mwari izvi. Havoka vava kutodya zvavo muchero uya wavakarambidzwa uya. Vakatadza vakazvichekanisa ukama hwavo huya naMwari, ushamwari ndokupera. Mmumafananidzo uyo wokurudyi tinoona shamhu yokuranga yakatemwa naMwari. Akaranga Adhamu naEvha nokuvadzinga nokuvadzinga zvachose mumunda macho. Kuvira nguva iyoyo vanhu vakabva vatanga kushanda zvakaomarara kuitira kuti vawane ckokudya, uye vanotambura zvinorwadza kwazvo nourwere pamwechete norufu. Heyo chenjedzo iya!
Mufananidzo 5: KAINI NAABHERO
Adamu naEvha vakanga vaine vana vavo vakomana vaviri. Mumwe ainzi Kaini mumwe achinzi Abhero. Kaini akaitira Abhero shanje. Kuzoti wava mumwe musi Kaini akauraya Abhero. Mwari akaranga Kaini sokuranga kuya kwaakaita Adhamu naEvha. Isu tiri zvizvarwa kana kuti vana vaAdamu naEvha. Naizvozvo nesu tose zvedu tiri vatadziwo sezvo mbudzi kudya mufenje hufana nyina. Chitadzo chinotiparadzanisa naMwari. Chedu chakatimirira chete kurangwa naMwari pamusana pemhosva yezvivi zvedu.
Mufananidzo 6: NGARAVA YANOWA
Kwakapera makore akawanda kwazvo, kukadarika zvizvarwa nezvizvarwa Adhamu akava navazukuru vakawanda kwazvo. Vanhu ivava vakaparawo zvitadzo vakarega kuteerera Mwari. Vanhu vakaita zvivi zvakakurisa kwazvo zvokuti Mwari akasvika pakuda kuparadza vanhu ivava namafashamo makuru kwazvo emvura. Asi kwaivapo nomurume mumwechete bedzi aida Mwari nokumuteerera. Zita rake rainzi Nowa. Mwari akaudza Nowa kuti avake ngavara huru yaizonunura iye Nowa nemhuri yake. Nowa akaparidzira vanhu shoko rokurarama kwaMwari mumakore ose iwayo aaivaka ngarava iyoyo. Asi vanhu vakaramba kutenda yambiro yaMwari yokuti vatendeuke vasiye nzira dzavo dzakaipa vagonunurwa mumafashamo emvura zhinji.
Mufananidzo 7: MAFASHAMO EMVURA ZHINJI
Nowa akaunza shiri nemhuka dzemhando dzose dzikapinda mungarava sezvaakanga audzwa naMwari. kuti aite. Ipapo Nowa nomudzimai wake navanakomana vake vari vatatu, mumwe nomumwe nomudzimai wake, vakapindawo mungarava muya. Mwari akapfiga musuo wacho. Mwari akatuma mvura zhinji kwazvo uyewo mvura yakavhazhuka ichibva pasi muvhu umu ikafashamira kuzara pasi pano. Izvozvo vamwe vose vakanga vatodya manonoko pasisina zvokuponeswa izvi. Asi Nowa nemhuri yake vakanga vakachengeteka zvavo vari mukati mengarava. Asi vamwe vone zvavo kunze kwengarava uku vakanga vanyudzwa nemvura vakafa. Chakaponesa Nowa ndechichi bedzi chokuti aiva munhu aivimba naMwari achimuteerera.
Mufananidzo 8: ABHURAHAMU NASARA NAISAKI
Kuzoti kwapera makore namakore vezvizvarwa zvaNowa vakazova namadzinza akawanda kwazvo. Abhurahamu, akanga ari murume aida Mwari achimuteerera. Mwari akavimbisa Abhurahamu kuti vana vake vaizova rudzi rukuru kwazvo rwananhu. Abhurahamu nomudzimai wake Sara vakanga vasina vana, asi Abhurahamu akatenda chivimbiso chaMwari. Mufananidzo uyo unotiratidza kuti vakazova havo nemwana mukomana ivo vachembera zvikuru kwazvo. Vakamutumidza zita rokuti Isaki. Mambo Jesu Kristu uya akauya kuzonunura vanhu pasi pano pose zvapo, akaberekwa nevedzinza raAbhurahamu naIsaki. Tichakurondedzerai nezvaJesu gare gare.
Mufananidzo 9: MOSESI MITEMO yaMWARI
Mosesi mumwe weVanhu vezvizvarwa zvaAburahamu vakava rudzi rukuru rwakazozivikanwa nezita rokuti Isiraeri. Mosesi aivimbawo naMwari uyezve aimuteerera. Rimwe zuva Mwari akadaidza Mosesi kuti akwira mugomo, ipapo Mwari akapa Mosesi mitemo yokuti azodzidzisa vanhu ivavo. Mufananidzo uyo unotiratidza, Mosesi achiburuka mugomo iroro akabata yaMwari yakanga yakanyorwa pamahwendefa amabwe. Mwari anoda kuti munhu wese zvake atevedze nomazvo achiita sezvinoreva mitemo yake kana kuti zvirevo zvake.
Mufananidzo 10: MITEMO GUMI
Heinoi mimwe mitemo yachoyakapiwa Mosesi naMwari.Inotidzidzisa kuti tide nokuteerera Mwari mumwechete wechokwadi chaiye. Regai, titangire pakuona mufananidzo uyo uri nechapamusoro wacho kuruboshwe. Tinoonaka kuti hatifaniri kunamata zvifananidzo kana kuti zvimufananidzo zvemhuka dzakaita zvokuumbwa kana zvimwe zvinhu zvasvo. Tinofanira kuti tinamate Mwari mumwechete oga wechokwadi iye Musiki. Onai mufananidzo unotevera uyo. Pana baba namai navana vari kunamata Mwari pamwe chete. Vanhu vose zvavo vanofanira kukudza nokuremekedza vaberiki vavo. Chionai mufananidzo uyo uri nechepapa pasi kuruboshwe. Mwari anoti: Isu hatifaniri kuuraya (uye) hatifaniri kurara nomukadzi womumwe (ndiko kuti usaite upombwe) Onai mufananidzo wokupedzesera uyo. Haitifaniri kuba kana kuchiva, (ndiko kutorwa moyo nechinhu chisiri chedu) kana kuba zvinhu zvomumwe. Mwari akatema kuti tinofanira kuchengeta mitemo yake.
Mufananidzo 11: CHIBAYIRO CHOKUPIRIRA ZVIVE
Munhu paaitadza (ndokutyoro mutemo waMwari) aitofanira kubayira kana kuti kupira gwayana kuna Mwari. Gwayana raifira kutsiva nzvimbo yomutadzi kana kuti mupari wemhosva. Gwayana iroro raiva mucherechedzo wokumirira Mwanakomana waMwari, mambo wedu Jesu Kristu. Jesu aizouya agofa sechibayiro chinopirwa kuna Mwari chokupirira vanhu vose zvavo pano pose. Ndiye akafa panzvimbo pedu pataifanira kufa isusu. Ndiye gwayana raMwari rinobvisa mhosva dzezvitadzo zvapasi pano pose. Jesu ndiye akazova chibayiro chemhosva dzezvitadzo zvedu nokufa kwaakaita pamuchinjikwa. Naivozvo chivimbai naJesu Kristu izvozvi mureurure zvitadzo zvenyu kwaari mutendeuke musiyane nezvivi zvenyu. Kana madaro, Mwari achakuregererai.
Mufananidzo 12: MUTUMWA NAMARIA NAJOSEFI
Zvino ngatichimbonzwai nhoroondo yokuberekwa kwaJesu. Kare kare, Mwari akavimbisa vanhu kuti achavatumira Muponesi. Iyeyi ndiye aizotinunura kumhosva dzedu dzedvitadzo zvatakapara. Pamufananidzo uyo wokuruboshwe uyo handiti muri kuona mutumwa waMwari akaburuka kudenga akashanyira umwe mukadzi wechidiki ainzi Maria. Maria akanga ari mhandara caiyo yakanga yatovimbisana zvokuroorwa naJosefi. Mutumwa waMwari akataurira mhandara iyi kuti Mweya wa mwari waizouya paari agobva abata pamuviri. Mwana wacho aizotumidzwa zita rokuti Jesu Mwanakomana waMwari. (Kana muri mumana rine vanhu vechitendero cheIsiramu siyai shoko rokuti Mwanakomana waMwari.) (Tarisai mufananidzo wokurudyi muone) Hoyo mutumwa wacho uya akandozviratidza kuna Josefi akataura naye mukurota usiku. Akaudza Josefi kuti, "Rega hako kutya kuroora Maria kuti ave mukadzi wake. Ane pamuviri paakabata zvichiitwa nesimba raMweya Mutsvene waMwari. Zita remwana wacho richanzi Jesu (zvichireva kuti Muponesi). Iyeyu ndiye achaponesa vanhu vake kuzvitadzo zvavo." Josefi akateerera Mwari (uyezve haana kubva apinda mumba pamwechete naMaria somukadzi wake. Asi akamirira kusvikira mwana aponwa) (Zvakadaro zvazvo izvozvo hazvina basa kuti zvitaurwe mune mamwe marudzi avanhu).
In all circumstances Jesu should be Jesu, not sometimes Jeso.
Mufananidzo 13: KUBEREKWA KWAJESU
Josefi naMaria vaitofanira kuti vaende kuguta rinonzi Bhetirehemu. Zvakaitika ndezvizvi zvokuti vanhu vakanga vazaridzana muguta iroro zvokuti vakasvikoshayiwa nzvimbo yokurara usiku ihwohwo. Chavo chete vaitofanira kurara mudanga rezvipfuo. Ndokusaka Maria akabva azoponera mwana wake Jesu mudanga imomo. Maria akanga achiri mhandara kusvikira pakaberekwa kwa Jesu. Usiku ihwohwo mutumwa waMwari akazviratidza kune vamwe varume (vaiva vafudzi). Izvozvo vakanga vachifudza havo hwai dzavo kumafuro aiva pedvo noko. Mutumwa wacho akavazivisa kuti Jesu aberekwa kuBhetirehemu. Pakarepo vakabva vaona vatumwa vaMwari vakawanda kwazvo vachiimba rwiyo vachirumbidza Mwari vari muchadenga. Naizvozvo varume ivava vakasimuka pakarepo vakandoona Jesu.
Mufananidzo 14: JESU MUDZIDZISI
Pamufananidzo wokuruboshwe uyo tiri kuona Jesu achine makore gumi namaviri. Ari kukurukura zvinonangana naMwari achitandara navadzidzisi pamwechete navatungamiriri veIsiraereri. Vaimuteerera vachibvunza mibvunzo. Vakashamiswa kwazvo vachiona ruzivo rwake rwezvinhu zvaMwari rwakanga rwakadzamisisa zvikuru kwazvo. Mufananidzo wechipiri uyo unotionesa Jesu akura zvino ava murume mukuru achidzidzisa vanhu nezvaMwari. Vamwe vanhu vakatenda zvidzidzo zvake vakamuteerera. Asi kwakaitawo vamwe vasina kumutenda vakatomumukira. Mwari anoda kuti isu tivimbe naye kana kutenda shoko rake tigomutevera.
Mufananidzo 15: MINANA YAKAITWA JESU
Mifananidzo iyo inoratidza masimba makuru kwazvo akapiwa naMwari Baba vachiapa kuna Jesu kuti aite nawo minana. Pamufananidzo wokuruboshwe uyo Jesu akagunzva mumwe murume akanga aberekwa ari bofu, ndokubva agona kuona. Pamufananidzo wapakati uyo tinoona Jesu achidzosera upenyu kuchitunha chemwana kuti araramezve. Onai baba naamai vomusikana wacho avo vari kuzvionera nameso vamirepo. Regai tipedzesere nokuona hoyo ari kufamba achitotsika hake nedzake tsoka pamusoro payo mvura. Jesu ari kufamba pamvura hake akananga kuvadzidzi vake. Ndiko kuvamwe vake vaya vari mugwa ravo ririmuoungwa. Heeka mambo Jesu akaita minana yakawandisa kwazvo saiyoyi iyi achiitira kuti vanhu vazive kuti iye ndiye Mwanakomana waMwari. Zvino kana nanhasi uno, Jesu achinawo masimba iwayo okuti anogona kutiyamura nawo.
Mufananidzo 16: NHAMO YAKAONESWA JESU
Jesu akaita zvishamiso zvakawanda kwazvo zvokuti vanhu vazhinji vakamutevera. Jesu aiva netsitsi. Aiporesa varwere achidzidzisa shoko raMwari. Akauya kuzonunura vanhu vakarasika vazere zvitadzo. Zvakadaro zvazvo vanhu vacho vakanga vakaipa mwoyo, ndivo vakamuvenga kwazvo paakangovadudzira pachena kuti vakanga vari vanhu vazere zvitadzo. Vatunggamiriri vavanhu vakaitira Jesu shanje. Vakaramba kutenda shoko rokuti Jesu akanga ari Mwanakomana waMwari. Vakamubata, vakamupomera mhosva dzenhema, vakamurova. Vakamupfekedza ndaza yeminzwa pamusoro pake, vakamupfira mate kumeso, vakamushora. Asi Jesu haana chaakavarambidza kuti vaite. Aizviziva hake kuti izvozvi ndizvo zvaizomuwira. Akatendera hake vanhu vakaipa ivavo kuti vamukuvadze uye kuti vamuuraye. Chake chaakauyira ndechokuzofa kuitira kuti ave chibayiro chokuripira mhosva dzavanhu vose zvavo kuna Mwari.
Mufananidzo 17: JESU ANOURAYIWA
Mambo Jesu akazorovererwa nehoko dzesimba padanda romuchinjikwa-Muchinjikwa wacho wakasumudzwa ukaita zvokudzikwa sebango mugomba ukati mbikiti kumira izvozvo Jesu akaturikwapo pauri kusvkira afa. Kwakarovererwawo dzimwe mbavha pamuchinjikwa; (dzakaurayiwawo zvimwechetezvo) pamwechete naJesu. Mumazuva iwayo iyoyi ndiyo yaiva tsika ineutsinye yaiitwa yokuuraya nayo vane mhosva noutsinye hwakaipa saihwohwu. Asi mufunge henyuka, Jesu akanga asina kumbopara kana kamhosva zvako. Ndiye akava chibayiro chokuripira mhosva dzezvitadzo zvavanhu vose zvavu. Isu tose zvedu takatadzira Mwari isu naizvozvo tinofanira kuti tifire mhosva dzezvitadzo zvedu. Asi shamhu yaMwari yaifanira kuranga isu tose zvedu, yakapotera pana Jesu. Chinzwaika! Kana tikabvuma pachena kuti chokwadi tiri vatadzi uye tikatendeuka pachokwadi tichipfidza zvitadzo zvedu, Mwari anotiregerera agotichenesamweya yedu achibvisa mhosva dzedzu dzezvitadzo. Hanna! Vimbai naJesu (mumutevere, mumugamuchire mumwoyo.) Ipapo muchaponeswa.
Mufananidzo 18: KUMUKA KUVAKAFA
Vanengi vaJesu vakafunga kuti vatomutsakatisa zvachose. Asi zvakanga zvisina kuita saizvozvo. Mushure mokunge Jesu afa pamuchinjikwa, shamwari dzake dzakaviga chitunha chake chiya mubako rakaita zvokufonongonwa pabwe. Vakapfiga musuo weguva nezibwe guru. Kwakapera mazuva maviri ese. Asi kuzoti rava retatu Jesu akamuka kuvakafa. Nguva yakazozvikawo vamwe vanamai paguva paya, vakasvikowana zibwe riya rakungurutswa rabviswa pamusuo. Izvozvo Jesu akanga aenda hake. Vatumwa vaMwari vaviri vakanga varipo, vakavazvisa kuti Jesu akanga ari mupenyu. Vakati, :Haasipo pano! Wamuka!" Jesu paakamuka kuvafi, akanyatsoonesa pachena kuti iye Jesu ndiMwari. Veduwe! Jesu achiri mupenyu nanhasi uno! Jesu ana masimba anodarika simba raSatani nesimba rorufu kwazvo!
Mafananidzo 19: TOMASI ANOTENDAWO
Kuzoti Jesu zvino amuka kuvafi, shamwari dzake navamwe vanhu vakamuona. Vakatoitawo hurukuro naye vakadya pamwechete naye. Asi mumwe ainzi Tomasi aive imwe shamwari yaJesu (ari mudzidzi wake) akaramba kutenda shoko rokuti, Jesu a kanga amuka kuvakafa pachokwadi, izvozvi ava kutoraramazve pakare. Tomasi akati, Kusvikira ndatoona mavanga ehoko dzesimbi dziya uye ndikatoabata, handimbotendi!ö Hoyo mufananidzo watiri kuona Jesu uya asvika achiratidza Tomasi mavanga ake. Tomasi uya akabva arega zvokukahadzika zviya. Akawira pasi pamberi paJesu akati, Mambo wangu naMwari wangu! Ipapo Jesu akati kwaari, Vakaropafadzwa zvavo ivo vasati vandiona, asi vanovimba neni.
Mufananidzo 20: KUKWIRA KUDENGA
Kwakapera mazuva makumi mana Jesu amuka kuvakafa. Izvozvo aizviratidza kuvanhu kakawandu. Vanhu vazhinji vakazvionera pachena kuti akanga ari mupenyu. Ipapo Jesu akanga zvino oda kudzokera kuna Baba vake kudenga. Akanga apedza basa raakanga avinga kuzoita. Jes akataurira vamwe vake vadzidzi kuti vazivise munhu wese zvake shoko rakanaka irori. Vadzidzi vakatarisa havo, onei Jesu obva pasi pano ava kuwira kudenga. Vatumwa vaviri (vanhu vakanga vakafeka nguo chena) vakaonekwapo.
Vakanyevera vadzidzi kuti rimwe zuva Jesu achodzoka achibva kudenga, achiuya pasi pano nomuitiro mumwechetewo nowavakamuona achiendanawo. Kutaura kuno; Jesu achiri kudenga kusvikira nguva yacho yazosvikawo. Ari ikoko ari kufanogadzirira nzvimbo yananhu vose vanovimba naye vanomutevera. Zvino, ko imiwo muripi? Munodawo here kuti muvimbe naJesu mugoti kwati kwati naye kumutevera? Ko, muchange makafanogadzirira kuzochingurana naye here?
Mufananidzo 21: MUCHINJIKWA
Jesu akafireiko pamuchinjikwa? Jesu akafirapo kuti anunure vatadzi kuitira kuti varege kuzorangairwa mhosva dzavo dzezv£vi. Rangarirai kuti ropa raJesu Kristu Mwanakomana waMwari ndiro rinotichenesa richibvisa mhosva dzedu dzose dzezvitadzo zvose. Jesu haana kana kumbopara zvitadzo, asi chake chaakafira ndechokuti bvisa zvitadzo nokuti ndizvo zvinocheke ukama hwedu naMwari. Muchinjikwa unotiyeuchidza kuti Jesu ndiye gwayana raMwari (dzvene, risina chitadzo risina kun'ora) rakaitwa chibayiro chokuripira mhosva dzedu. Paya patinovimba naJesu tichitendeuka (tichisiyana nezvitadzo) zvinoitika ndezvokuti Mwari anotiregerera. Jesu anobva atiita kuti tive vana vaMwari (tova noushamwarizve naye). Mufananidzo unotevera uyo unotiita kuti tinzwisise chaizvoizvo zvinoreva shoko rokuti munhu wava mutendi (kana kunzi muKristu, nomuteveri waJesu Kristu).
Mufananidzo 22: NZIRA MBIRI
Jesu akadzidza vanhu kuti kune nzira mbiri. Ani naani zvake kubvira paanongoberekwa chete anenge atova murwendo rwomunzira huru yezvivi inosvitsa munhu mukuparadzwa (kana kuti mumoto, muGehena). Tose zvedu, takaberekwa tiine kaupenyu kokufarira kuita zvitadzo katakatatapurakuna Adhamu satateguru wedu tose. Asi Jesu anoda kuti titipinde munzira diki inosvitsa vanhu kudenga kuna Mwari. Kana munhu achiri kurarama panyika nhasi akavimb naJesu akati kwati naye kumutevera, anobva atozviwanirawo upenyu husingaperi. Izvozvo anenge atopira gotsi nzira huru iya atopinda munzira nhete iya inosvitsa kudenga. Kana munhu ava munzira diki, haasisina mhosva yechitadzo yaachatongerwazve.
Kana ukasarudza kutevera Jesu, unogona kutaura naMawari nomunamato sezvizvi uchiti, Mwari! Ndinoda kududza pachena kwamuri kuti ini ndiri mutadzi. Asi ndinovimba naJesu kuti ndiye akafa pamuchinjikwa achindiripira mhosva dzezvitadzo zvangu. Ndiregererewo muchenese mwoyo wangu midiite kuti ndivewo mumwe womumhuri yenyu. Ndiri kuda kutevera mararamiro anoita Jesu. Kunyangwe ndikafa, ndinoda kuzogara nemi mudenga. Ndatenda Mwari! Kana ukatenda nomwoyo wose ukanamata uchitaura kuna Mwari saizvozvi unobva watopindawo munzira diki yacho. Ndiyo nzira yomufaro chaiwo norugare naMwari.
Mufananidzo 23: VANA VAMWARI
Onai Jesu anogamuchira vanhu vanobva kumarudzi namadzinza nemitauro yose yose zvayo. Vanhu ivava, vanhu vakavimba naye vakavawo vana vaMwari. Vari munzira nhete inosvitsa vanhu kudenga. Vanhu vaMwari vakangoita semhuri. Vose zvavo vanosunganidzwa pamwechete vari muna mambo Jesu.
Mufananidzo 24: KUBEREKWA PATSVA
Rimwe zuva usiku, mumwe mudzidzisi wezvokunamata izvi ainzi Nikodhimo, akasvika kuna Jesu kuzodzidza zvimwewo zvakawandawanda nezvaMwari. Ipapo Jesu akamuzivisa kuti ani naani zvake anoda kuva mumwe wevemhuri yaMwari (kana kuti kupinda denga) anofanira kuti atova nomuraramiro mutsva. Zvakangoita sokuberekwa patsva. Mufungeka! Isu pachedu atina masimba okugona kuti tizvishandure pachedu isu. Asi Mweya Mutsvene waMwari ndiye woga anotipe mamwe mararamiro matsva kana isu tangovimba naJesu tava kumutevera. Ipapo ndipo patinozovawo vanhu vatsva, vanhu chaivo vaMwari savana vake pachake.
Mufananidzo 25: KUUYA KWAMWEYA MUTSVENE
Varume ava vadzidzi vaJesu kana kuti shamwari dzake. Jesu paakakwidzwa kudenga, akavavimbisa kuti aizovatumira Mweya Mutsvene. Kuzoti zvino kwapera mazuva gumi Jesu akwidzwa kudenga, vadzidzi ivava vakanga vakaungana pamwechete vari munzvimb imwechete. Vakayerekana Mwari Mweya Mutsvene auya akasvikovazadza vose zvavo sezvaakanga avavimbaisa. Ipapo vanhu ivavo vakagamuchira masimba okutaura nendimi dzakasiyana siyana dzokuzivisa vamwe vanhu zvinhu zvinoshamisa zvakanga zvaitwa naMwari kwavari. Mweya waMwari anogara muvatendi vepachokwadi vose zvavo uye nomuvateveri chaivo vaJesu achivapa masimba okuti vade Jesu nokumuteerera.
Mufananidzo 26: KUFAMBA MUCHIEDZA
Kana munhu asati avimb naJesu, anoita somunhu uyo ari pamufananidzo uyo wokuruboshwe uyo anofamba murima. Anodzadzarika kana kutowirawo mukutadzira Mwari kazhinji zvichikonzerwa nokuti haana chiedza chokutungamirira. Zvino patinovimba namambo Jesu, tinobva taita somunhu ari kufamba muzira yakatwasuka zuva rakacheka nyika. Jesu akati, öNdini chiedza chenyika. Kana munhu akanditevera, haazofambi murima. ö Mwari chaanopira vanhu Mweya wake Mutsvene ndechichi chokuti anovabatsira achidzidzisa vatendi vose mararamiro ake.
Mufananidzo 27: KUTEERERA SHOKO RAMWARI
Mutendi (muKristu kana kuti muteveri) waJesu Kristu, munhu ava nomururaramiro mutsva anoteerera achiita sezvinoreva Shoko raMwari. Angara achitenda Mwari nokuti akamuregerera zvitadzo zvake. Mutendi haaiti upombwe. Haarwisane navanhu kana kpopotedzana navo. Haabi. Haateketere kunamata zvimifananidzo kana vamwewo vanganzi ngavaereswe saMwari, kana mimwewo mweya mweya. Mweya Mutsvene aopa vanhu masimba okusiya zvinhu zvakaipa. Anopawo masimba okuti mutendi agone kuita mabasa akanaka.
Mufananidzo 28: MHURI YAVAKRISTU
Tarisai muonewoka iyo mhuri inofamba munzira yaMwari! Murume wacho anoda mudzimai wake. Mudzimai anoremekedzawo murume wake vose vachitevedza Shoko rakatemwa naMwari. Vanoyamurana vachikuridzirana uye vanorera vana vavo vachivadzidzisa kuti vade Mwari uye kuti vadzidzewo zvinhu zvakanangana neShoko raMwari nokuriteerera kuita sezvarinoreva. Mhuri yavaKristu kana (kuti vatendi) vanofanira kunamata nokuita chirwirangwe chokushanda basa raMwari pamwechete.
Mufananidzo 29: IDAI VAVENGI VENYA
Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kana kuti vanhu vanomutevera kuti vade munhu wese zvake. Izvi zvaisanganisira kunyangwe navavengi. Tinofanira kubatsira munhu wose wose zvake anenge achitambura kunyangwe navanhu vamamwewo madzinza asiri evokwedu. Jesu akarondedzera imwe nyaya yomumwe murume akazvambadzwa kurohwa akapambirwa zvinhu zvake namakororo nembavha. Zvakazoitika ndezvokuti mumwewo munhu worumwewo rudzi rwavanhu zvake, ndiye akazoona murume uya aiva mupfuuri hake nenzira nyakukuvadzwa zvakaipisisa uya. Akayamura achiitira hanya murume uya nyakukuvadzwa zvakaipisisa kwazvo uya nokuti akanga awirwa nenhamo chaiyo. Nyakubatsira haana kana kuzoreva muripo. Jesu akati nesu tinofanira kuitawo zvinhu zvakanaka zvakangoita saizvozvowo.
Mufananidzo 30: JESU NDISAMASIMBA
Vanhu avo vari kupisa zvimifananidzo zvokunamata nemishona yezven'anga. Ndizvo zvavaivimba nazvo pavakanga vasati vava vateveri vaJesu kana kuita vaKristu. Asi vaKristu vanotenda vanofanira kubvisa muupenyu hwavo zvinhu zvosezvokwaSatani nezvinhu zvemweya yakaipa. Mambo Jesu vane masimba anokurira Satani nemweya yakaipa nezvifananidzo nemishonga yezvenAEanga namakona. Satani zviwo zvokumutya, hatifaniri kana kumbomutya hedu. Tinofanira kukumbira chete Mwari kuti atiyamure.
Mufananidzo 31: KUDZINGA MWEYA YAKAIPA
Pamufananidzo twiri kuona munhu azere nemweya yakaipa kana kuti akagarwa nayo. Vanhu vakanga vakundikana zvokumusunga netambo necheni nokuti mweya yakaipa yakanga yakamugara yakanga yakaipirwa kwazvo nesimba. Jesu akadzinga mweya yakaipa iyoyo, madhimoni kuti ibude mumuFume iyeyo. Yakabuda ikaende. Yakatoteerera Jesu nokuti ndiye ana masimba anodarika Satani namadhimoni ake. Murume uyu akanunurwa akava munhu akasunguka kwazvo asisina kugarwa nemweya yakaipa yacho. Naizvozvo murume uyu akandotaurwrawo shamwari dzake zvaakanga aitirwa naJesu. Jesu ana masimba anopfuura nokure kwazvo simba ra Dhiabhori nemweya yakakaipa zvokuti mweya yakape Yose iyoyo inofanira kuti itomuteerera chete.
Chiita sarudzo: Kana muchioseswa nhamo yokunetswa nemweya yakaipa, kumbirai henya vamwe vatendi vagokunyengetererei muinavo. Itai zvokukumbira samasimba mambo Jesu Kristu kuti adzinge mweya yakaipa yacho iende kuro nemi. (Kana makagarwa nemweya wakaipa kana kuti mweya yakaipa, munogona kukumbira vatendi kana kuti vaKristu kuti vauye kuzokunamatirai. Ngavanamate vachikumbira Mwari nomuzita raJesu kuitira kuti mweya iyoyo ibude iende. Ngavaidzivise kuti irbge kana kuzombodzokazve mumunhu iyeyo. Kana isu tikada Jesu tiakagara tichimuteerera, iyewo anobva aitawo musha wake matiri isusu. Saka masimba ake anotichengetedza zvakanaka uyesve Satani haazogoni kutikuvadza.
Mufananidzo 32: KUTEVERA JESU
Mufananidzo uyo unotiratidza mutendi awirwa nomuedzo wokuda kusvika pakukanda pasi nyaya yokutevera Jesu. Satani anovavarira kuti isu tisvike pakukanganwa Mwari uye kuti titorwe mwoyo nokufunga mari nguva dzose uyewo kufungisisa zvokupfeka nefodya nedoro nezvimwe zvinhu zvose zvakasiyana-siyana. Satani anotizevezera kuti zvinhu izvozvo ndizvo zvinoita kuti tinyatsosasana kufara. Asi chake Satani chete, anoreva nhema. Satani murevi wenhema anovavarira kutifurira nokutitsakatisa. Asi Mwari akati, Dzivisai Dhiabhori iye agokutizai. Mwari ndiBaba vedu vari kudenga. Anoziva kwazvo nhamo dzinowira vana vake. Akativimbisa kuti anopa zvinhu zvakanaka kuvanhu vanenge vakumbira kwaari. Paya patinovimba naMwari tichiteerera Mwanakomana wake Jesu, ndipo patinozviwanira masimba aMwari okutibatsira munguva dzatinoedzwa.
Mufananidzo 33: KANA TIKATADZIRA MWARI
Jesu akamboita rungano rwakadai izvi. Kwaivapo nomumwe mukomana akasimuka akabva pamusha. Akaenda hake kure kure akasvikoita rubata-bata rwezvinhu zvakaipa zvakawanda. Akaparadza mari yose yaakanga apiwa somugove nababa vake achirarama upenyu humwe hwakaipisisisakwazvo. Mari yake payakazopera yose zvayo, kwakamuka nzara huru kwazvo yakatekeshera nenyika iyoyo. Naizvozvo mukomana uya akava murombo wokupedzesera chaiye uku nzara ichimubaya zvakaipisisa kwazvo. Asi akazodemba oshungurudzwa nechitadzo chake chaakapara ichocho. Akadzokera kuna baba vake akasvikokumbira kuti vamuregererewo. Chaivapo chaicho ndechichi chokuti baba vake vaimuda zvikuru kwazvo. Naizvozvo vakanamuchira havo mukomana iyeyu akadzoka mumusha mevokwake. Ngano iyoyi inotisira pachena shoko rokuti kana tikatadzira Mwari, tinofanira kureurura zvitadzo zvedu pachokwadi kuna Mwari tigopfidza zvitadzo izvozvo. Mwari anotidazvikuru kwazvo, ndokusaka achizotiregerera zvitadzo zvedu. Anotigamuchirazve tigodzokera mukuyanana naiye Mwari pakare.
Mufananidzo 34: ZVIRWERE
Murume nomukadzi avo vari apo vari kutambura nokufunge nokuti hama yavo iri kurwara zvakaipisisa kwazvo. Ko, vanhu vaMwari vangaiteiko kana vawirwa nourwere. Vanomhanyira kuna mambo Jesu vachivimba naye kuti anogana kuwana chaangaite chaanoona kuti ndicho chakanakisisa kwazvo. Kana Mwari akada hake, anoporesa munhu iyeyo. Chimwewo chingaitwe naMwari ndechokuti anogona kubatira murwere wacho kuti awaniswe mushonga kwawo wokumurapa. Mwari anotida uyezve ndiye ana masimba pamusoro pezvinhu zvose zvinowira vana vake. Mwari anodzivirira vatendi kusimba raSatani, saka hatifaniri kana kumutya. Asi ngativimbei naJesu kuti ndiye muchengeti wedu. Jesu anesu anoda kutipa rugare rwake munguva dzokutambudzika.
Mufananidzo 35: RUFU
Chatinonyatsoziva tese ndechokuti rimwe zuva tichafa. Asi chii chinozoitika mushure mazvo? Kana mutendi akafa, mweya wake unoenda kunova pamwechete nanambo Jesu Kristu. Bhaibheri, Shoko raMwari rinotizivisa kuti tinoenda kuti tinova pamwechete naJesu. Saka shamwari dzomufi wacho nehama dzake dzapamwoyo havafaniri kukurirwa neshungu. Hatifaniri kutya rufu nokuti chedu isu chatinoziva chete ndechokuti Mwari anotida ndiye akatinunura kumhosva dzedu dzezvitadzo. Vanhu vaya vasingavimbi naJesu, havana chitarisiro chakadai chinoshamisa chokuti mushure mokunge munhu afa, anozoraramazve achigara zvino pamwechete naMwari. Chavo chakavamirira chete ndechokuenda kunzvimbo yokurangwa. Ko, imi muchaendepiko kana mazofa?
Mufananidzo 36: MUVIRI WAKRISTU
Apa tiri kuona dzimwe nhengo dzakasiyana-siyana dzomuviri womunhu. Nhengo inse neimwe yomuviri womunhu ine basa rayo rokuita. Ziso nderebasa rokuona naro, nzeve neyokunzwa nayo kwouya muromo une basa rokudya nerokutaura nawo. Handiti nhengo dzose dzomuviri womunhu dzinoita mushandirapamwe. Kana imwe nhengo ikarwara kana kuti kukuvadzwa nokukuvara, muviri wose pamwechete nayo unonzwira pamwechete nhamo iyoyo. Mwari anoti vatendi inhengo dzomuviri mumwechete unonzi sangano kana kuti chechi. Jesu ndiye musoro womuviri iwoyo. Mwari ane basa rokuti mutendi wose wose zvake aite. Regai tipe somufananidzo mabasa anoti kuparidza shoko raMwari nerokuimba nziyo dzake dzokumurumbidza uyewo kurimira mhuri zvokudya kana kuvabikira zvokudya. Mumwe nomumwe anofanira kuti ashandire mambo Jesu basa rokubatsira muviri wose waKristu kuitira kuti kuti usimbe. Vatendi vose vanofanira kuitirana rudo vachiita chirwirangwe chokushanda pamwechete. Kana vakarega kuita saizvozvo, muviri wacho waKristu unotambura.
Mufananidzo 37: KUSANGANA PAMWECHETE
Vatendi vose vanofanira kupota vachisangana pamwechete kuti vazonamata Mwari nguva nenguva. Tinofanira kudzidza zvinhu zvomuBhaibheri, shoko raMwari tichiimba nziyo tichinamata. Tinofanirawo kuunza zvipo zvokushandisa pabasa raMwari. Mwari anoda kuti tigarowo tichirangarira kuti mambo Jesu Kristu akafira kutinunura. Ipapa ndipo patinoona vadzidzi (kana kuti vanhu vaMwari) vachidya pamwechete nokunwa pamwechete. (Zvose unobva wava muchechetere.) Chingwa chokudya chinotiyeuchidza muviri waJesu wakaita zvokuboorwa boorwa pamuchinjikwa paya kuitira isu. Chokunwa chanotiyeuchidza ropa rake rakadeurirwa kuita basa rokushambidza isu richibvisa zvitadzo zvedu richitisvitsa pedyo Mwari. Tinofanira kurangarira kuti Jesu akatifira kuti tigone kumuda nomwoyo wose.
Mufananidzo 38: JESU ACHADZOKA
Izvozvi zvitaitika nenguva chaidzo dzaMwari dzisingarasi. Nyika ichaerekana yoona Jesu achidzoka achibva kudenga sezvaakavimbisa chaizvoizvo. Achadzoka kuzotora vatendi vechokwadi vose zvavo ivo (mhuri yaMwari). Mambo Jesu achaita kuti vanhu vose vaMwari vakafa vamuke pakare makuva avo asare asisina chitunha. Vanhu vaMwari vanenge vachiri vapenyu kusvikira panguva iyoyo vachabatana navo vosimuka vachibva panyika vobva vakwira kudenga. Vatendi vose zvavo vachandosangana namambo Jesu mumakore vanozogare naye narini narini. Vanhu vanenge vasina kuvimba naJesu vachasara shure vangotarisana chete nokutonga kwaMwari kunotyisa kwazvo. Asi hatizivi nguva chaiyiiyo inodzoka Jesu. Saka tinofanira kugara takangogadzirira (takamirira savarindi). Ngatitii mambo Jesu vada kudzoka nhasi, makafanogadzirira here kuzochingurana navo?
Mufananidzo 39: KUBEREKA MUCHERO
Handiti muri kuona muti womuchero uri pamufananidzo uyo? Saizvozvowo mutendi (kana kuti muKristu) anofanira kubereka muchero waMeya Mutsvene. Jesu akati, "Ndini muzambiringa wazvokwadi. Imi muri matavi. Kana muchigara mandiri neni mamuri muchabereka michero yakawanda." Mweya Mutsvene waMwari anotoraramawo upenyu achisanda ari mukati memwoyo yedu umu (mukatiri medu) achiita kuti tibereke muchero woRudo no Rufuro noRugare noMoyo Murefu noMoyo Munyoro noKunaka noKutendeka noUnyoro noKuzvidzora muupenyu hwedu. Kana matavi omuti iwoyo asingabereki muchero, anotemwa obviswa ofa obva apiswa. Vateveri vaJesu vanofanira kubereka muchero zviya zvokubereka zviya izvi. Apa tiri kureva mhando yakanakisisa kwazvo yomuchero wakaita soRudo nemimwe iya. Ndiwo muchero unopa Mwari kubwinya kwake (nokumuremekedza) iye Baba wedu wokudenga.
Mufananidzo 40: KUZIVISAWO VAMWE NEZVAJESU
Jesu akatemera vatendi vose zvavo kuti vanofanira kuenda vachitaurira vamwe shoko rinoshamisa kwazvo nezvaJesu kuitira kuti naivo vanunurwe mumhosva dzavo dzezvitadzo nokupunyuka Gehena. Mufananidzo uyu unotiratidza mutendi anoteerera chirevo chaJesu. Hoyo ari kutaurira vamwe nezvaJesu. Mweya Mutsvene waMwari ndiye achatibatsira nokutipa masimba okuti tipupure nezvaJesu Kristu. Naizvozvo munogona kuzotsanangurirawo shamwari dzenyu navamwewo zvinhu zvamadzidza mubhuku remifananidzo rino iri. Zvapera!
See different versions of this script in Afrikaans, Amarasi, Baikeno, Bislama, Buhutu, Buru, Chinese Simplified, Chuwabo, Creole: Mauritius, Dhao, Dhimba, English, English: Southern Africa, French, Gao, German, Hausa, Helong, Ilwana, Japanese, Koli, Wadiyara, Kupang Malay, Lunda, Malagasy Merina, Marovo, Naro, Ndau, Ndebele, South, Ngonde, Nyungwe, Phu Thai: Renu, Pijin: Solomon Islands, Portuguese: Brazil, Portuguese: Mozambique, Romanian, Russian, Sena: Mozambique, Shimaore, Spanish, Taabua, Tewe, Thai, Tok Pisin: PNG, Tonga: Valley, Umbundu, Urdu, Vangunu, Varisi, Yao: Malawi, Yao: Mozambique, Zambal, Cabangan.